हेपाटाइटिसका पाँच प्रकार: कुन कस्तो, कसरी सुरक्षित हुने? विश्वभर हरेक सेकेन्ड एक व्यक्तिको हेपाटाइटिस बाट मृत्यु हुने गर्दछ। हेपाटाइटिसले कलेजोलाई असर गर्छ। विश्वका लगभग २.३ अर्ब मानिस एक वा बढी हेपाटाइटिस भाइरसबाट संक्रमित छन्। बुधबार, साउन १३, २०७८
गर्भमा बच्चाको गतिविधि र महत्व, कहिले चल्छ बच्चा? महिना बढ्दै जाँदा बच्चा चल्ने क्रम पनि बढ्दै जान्छ र अधिक मात्रामा बच्चा चल्ने भनेको २९ देखि ३८ हप्तामा हो। राम्रोसँग सामान्य तरिकाले बच्चा चल्नु भनेको बच्चाको केन्द्रीय स्नायु प्रणालीको विकास र कामकाज राम्रोसँग भएको भन्ने बुझिन्छ। सोमबार, साउन ११, २०७८
गर्भावस्थाको पहिलो चरण : गर्भाधानपूर्व परामर्श लिन किन जरूरी छ? एउटा अचम्मको तथ्यांक छ, विश्वव्यापी रुपमा वार्षिक २० करोड गर्भधारणमध्ये ५० प्रतिशत बिना तयारी या भनौं इच्छा विपरित हुने गर्छन्। आइतबार, साउन १०, २०७८
खुट्टा किन गन्हाउँछ? खुट्टामा पसिना आउने र गन्हाउने कुनै रोग होइन। तर, कुनै रोगसँग सम्बन्धित हुन सक्छ। त्यसैले यो समस्यालाई बेवास्ता गर्नुभन्दा पनि सचेत हुनु आवश्यक छ। आइतबार, साउन १०, २०७८
उन्मुक्त हाँसो एक अमूल्य औषधि “तिमीले गधा हाँसेको कहिल्यै पनि देखेका छैनौ, त्यस्तै न तिमीले भैंसीलाई ठट्टामा रमाइरहेको देखेका छौ। मानिसमात्र हो जो हाँस्न पनि सक्छ र ठट्टा पनि गर्न सक्छ। त्यसैले कहिल्यै नहाँस्ने वा ठट्टा नगर्ने तिम्रा साथीभाइहरू भैंसी वा गधाजस्ता हुन्।” शनिबार, साउन ९, २०७८
विषाक्त मदिरा : शरीरमा नकारात्मक प्रभाव र रोकथामका उपायहरू विषाक्त मदिराको सेवनबाट स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असरहरूको बारेमा सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान समय समयमा हुनु जरुरी देखिन्छ। यी कदमहरूले विषाक्त मदिराको रोकथाममा सहयोग पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। शनिबार, साउन ९, २०७८
कोभिड भ्याक्सिन र एलर्जीः के एलर्जी हुने व्यक्तिले भ्याक्सिन लगाउन मिल्छ? अरु विभिन्न औषधिहरु जस्तै कुनै पनि भ्याक्सिनप्रति एलर्जी देखिन सक्छ। कोभिड भ्याक्सिनप्रति पनि संसारमा विभिन्न किसिमका साधारण र कडा एलर्जी देखिएका छन्। शुक्रबार, साउन ८, २०७८
संक्रमण फ्लूको, त्रास कोरोनाको! हाल कोरोनासंगै फ्लू पनि देखिएको र यी दुई भाइरसहरु बीच लक्षणहरु धेरै मिल्दो जुल्दो हुँदा फ्लू संक्रमितहरुले कोरोनाको पनि थप त्रास/मानसिक तनाब लिनु परेको देखिन्छ। बिहीबार, साउन ७, २०७८
'स्मार्ट लामखुट्टे' एडीस देखिँदै! 'त्रियो' भाइरसको जोखिम? 'स्मार्ट लामखुट्टे' एडीस देखिँदै जाँदा डेंगु र चिकुनगुनिया भाइरसको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। नेपालमा सन् २००४ र सन् २०१३ मा पहिलोपटक डेंगु र चिकुनगुनिया भाइरसहरु क्रमश: पत्ता लागेका हुन्। बिहीबार, असार ३१, २०७८
बच्चालाई ज्वरो आउँदा हुने मिर्गी के हो? फेब्राइल सीजरको लक्षण छारेरोगको जस्तो हुने भए पनि यो छारेरोग भने होइन। फेब्राइल सीजरले सामान्यतया स्थायी प्रकृतिको क्षति वा मस्तिष्कमा क्षति हुँदैन। मंगलबार, असार २९, २०७८
शारीरिक व्यायाम र खेलकुदले बुढ्यौली हुने क्रम नियन्त्रण गर्छ शारीरिक व्यायाम र खेलकुदमा मानव शरीरका मांसपेशीहरु तन्किने र खुम्चिने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ। यस्तो प्रक्रियाको लागि शक्ति र अक्सिजन निरन्तर चाहिन्छ। खानेकुराहरुबाट शक्ति प्राप्त हुन्छ भने अक्सिजन हावाबाट फोक्सो हुँदै रगतको माध्यमबाट मांसपेशीमा पुग्छ। सोमबार, असार २८, २०७८
गर्मीमा देखिन सक्छन् छाला सम्बन्धी यी समस्याहरु खानामा भिटामिन सी, भिटामिन ई, भिटामिन ए भएका खानेकुराहरु खानुपर्छ। अम्लीय फलफूल तथा खानेकुरा खानुपर्छ। अहिले आँपको सिजन छ। आँप पनि छालाको लागि फाइदाजनक मानिन्छ। सोमबार, असार २८, २०७८
बालबालिकाका आँखा कसरी जोगाउने? यी हुन् उपयुक्त उपायहरू आजभोलि साना साना बालबालिका रोए वा खाना खान मानेनन् भने मोबाइल/ल्यापटप देखाएर मनाउने वा खाना खुवाउने गरिन्छ। यो खराब बानी बालबालिकाहरूले सानै उमेरबाट नै आफ्ना अभिभावकमार्फत् सिकिरहेका हुन्छन्। आइतबार, असार २७, २०७८
सौन्दर्य सामग्रीहरुले स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने असर सौन्दर्य सामग्रीहरु मिश्रण तयार पार्दा त्यसमा प्रयोग गरिने प्रत्यक रसायनहरु मापदण्ड अनुरुप सही अनुपातमा मिसाइएको हुनुपर्छ। सोमबार, असार २१, २०७८
ज्वरो आएको छ? स्क्रब टाइफस पनि हुनसक्छ! गत वर्ष कोभिड–१९ बाहेक अन्य संक्रामक रोगहरु देखिएनन्। तर, यो वर्ष कतिपय संक्रामक रोग फेरि देखिन थालेका छन्। अहिले कुनै पनि ज्वरोलाई कोरोनाको शंका गरिन्छ। शुक्रबार, असार १८, २०७८
लामो समयदेखिको टाउको दुखाइ : कारण र उपचार टाउको दुख्ने समस्या विश्वव्यापी रुपमा अधिकांश मानिसमा हुने गर्दछ। चिकित्सा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै गुनासो गरिने समस्यामध्ये यो पनि एक हो। शनिबार, असार १२, २०७८
तपाईंको तौल कति हुनुपर्छ? स्वस्थ व्यक्तिहरुमा आफ्नो आइडिएल तौल कति हुनुपर्छ भन्ने जिज्ञासा सबैमा हुनसक्छ। तर व्यक्तिको तौल यति नै हुनुपर्ने भन्ने हुदैन। यो धेरै कुराहरु जस्तैः व्यक्तिको उमेर, उचाई, लिंग, शरीरको बनावट, मांसपेशी र बोसोका मात्रा आदि कुराहरुमा भर पर्छ। शुक्रबार, असार ११, २०७८
दुबी बारे केही भ्रम र यथार्थ दुबीको उपचार चुनौतिपुर्ण मानिन्छ। विभिन्न उपचार बिधी (मल्हम, खाने औषधि, सेक्ने बिधी, रङ छोप्ने कस्मेटिक क्रिमहरु, सर्जरी)को प्रयोग गरेर यसको रोकथाम सम्भव छ। शुक्रबार, असार ११, २०७८
के हो मास्क माउथ? ६ लक्षण र रोकथामका उपाय मास्कको यही नियमित प्रयोगले हामीलाई भाइरस संक्रमणको जोखिमबाट केही सुरक्षा प्रदान गरे पनि यसका केही नकारात्मक प्रभाव पनि देखिन थालेका छन्। आइतबार, असार ६, २०७८
कोभिड–१९ र जीनको सम्बन्ध बाबजुद कोसँग कुन जीन छ भन्न नसकिने भएकाले हर कोही खतराको सुचिमा छ। स्वास्थ्यका आधारभूत मान्यताहरु सबैले अपनाउनुको अर्को विकल्प छैन। बिहीबार, असार ३, २०७८
कोभिड-१९ महामारी: वर्तमान निदानको अवस्था पिसिआर टेस्टको सजिलै पहुँच नभएको अवस्था या टेस्ट बढाउन साथै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको गर्नुपरेमा एन्टिजेन जस्ता बढिमा आधा घण्टामा हुने टेस्ट गरौं। मंगलबार, असार १, २०७८
दन्त फ्लस के हो? पक्कै पनि, केवल फ्लस गर्न मात्र पर्याप्त छैन। सही रूपमा फ्लस गर्नु निकै महत्वपूर्ण छ। अनुचित हिसाबमा फ्लस गर्दा, तपाईंको दाँत र गीजाहरूलाई सम्भावित रूपमा क्षति पुर्‍याउन सक्छ। त्यसैले फ्लस पनि सही तरिकाले गर्नु आवश्यक छ । सोमबार, जेठ ३१, २०७८
रक्तदान जीवन दान: कसले गर्न मिल्छ, कसले मिल्दैन? सन् २०२१ को लागि, विश्व रक्तदाता दिवसको नारा “रगत दिनुहोस् र विश्वलाई जिवन्त राख्नुहोस्” रहेको छ। यस सन्देशले रगत दाताहरूले अरुको जीवन बचाउनुका साथै स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनका लागि पुर्‍याउने भूमिकालाई ध्यानाकर्षण गर्दछ। सोमबार, जेठ ३१, २०७८
हर्निया के हो? कसरी हुन्छ उपचार? हाम्रो समाजमा रोग देखाउने लाजले गर्दा अजै पनि धेरै बिरामीहरु समयमा अस्पताल आउदैनन र पछि जटिलता लिएर गम्भीर आवस्थामा आउँछन्। त्यसकारण समयमा नै चिकित्सकलाई देखाएर, उपचार गराएर नै यो रोगबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ। बिहीबार, जेठ २७, २०७८
मधुमेह र कोभिड : सम्बन्ध र तथ्य मधुमेह आफैँमा रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर बनाउने अवस्था हो। यसमा कोभिड हुँदा धेरै एन्टिबायोटिकको प्रयोग, लामो अस्पताल बसाइ, ओसिलो र अशुद्ध अक्सिजन प्रयोग हुँदा कालो ढुसीको समेत संक्रमण देखिने र यसमा मृत्युदर उच्च हुन सक्छ। सोमबार, जेठ २४, २०७८
'खोप लगाएका मानिस संक्रमित त भए, तर, कम मात्र सिकिस्त भए' दोस्रो लहरको एउटा सुखद अनुभव भनौं, खोप लगाएका मानिस संक्रमित त भए, तर, कम मात्र सिकिस्त भए। यसले के देखाउँछ भने, कोरोनाबाट बच्न खोप एक मात्र अचुक उपाय हो। अबको अभियान धेरैभन्दा धेरैलाई खोपको व्यवस्था नै हो। आइतबार, जेठ २३, २०७८